Hatramin’ny 23 Aprily no mankaty fotoana nidirantsika tao anaty fihibohana mantsy dia hifandrombahana ireo kazarana ravi-maintso mampiavaka antsika toy ny ravintsara, ny kininim-potsy, ny mandrava sarotra karazana zava-maniry voalaza fa miady amin’ny tsimok’aretina coronavirus . anisan’ny efa nahasitrana ireo olona narary sasantsasany nijoro vavolombelona. Ho an’ny ravintsara manokana raha araka ny resaka nifanaovana tamina mpivarotra iray dia mahalafo 10.000 Ar na 20 fonosana isan’andro izy ireny raha kely; 500 Ar no hamarotany ny fehezany iray lehibe.Hampiasaina hanaovana evoka hafangaro amin’ny kininim-potsy hanadiovana ireo lalan-drivotra nahiana ho nidiran’ny mikraoba. Toraka izany koa ity farany izay vidina 500 Ar ihany koa ny iray fehezana raha 1.000 Ar vao mahazo mandrava sarotra. Karazan-kazo iray lehibe ity farany. Kikisana no fampiasana azy ary hafangaro amin’ny rano sotroina nefa mety havadika ho sirop iadiana amina tsimokaretina maro samihafa ihany koa. Tsiahivina moa fa anisan’ny antony nahatongavan’ilay tera-tany vahiny mpizahantany teny Isotry ny fividianana tapa-kazo sy raokandro iadiana amin’ny coronavirus tahaka izao. Efa nahafantatra mantsy izy fa tena manana ny maha-izy ny Malagasy eo amin’ny resaka zava-maniry entina manasitrana aretina maro.